Waa kuma Hanti dhowrka guud ee qaranka maanta la magacaabay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Waa kuma Hanti dhowrka guud ee qaranka maanta la magacaabay
Waa kuma Hanti dhowrka guud ee qaranka maanta la magacaabay
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa maanta magacaabay Hanti Dhowraha Guud ee cusub ee Qaranka.
Golaha wasiirada ansaxiyay hanti dhorahan ka dib markii wasiirka maaliyadda uu soo hordhigay golaha.
Hanti dhowrka cusub ayaa lagu magacaabaa Maxamed Cali Afgooye, waxaana uu bedelaya Hanti dhowrkii hore Nuur Faarax kaasi oo xilka looga qaaday shilkii uu ku dhintay Wasiirkii hore ee Howlaha Guud Cabaas Siraaji.
Haddaba waa kuma hanti dhowrka cusub?
Wuxuu ku dhashay magaalada Istaraatiijiga ah ee Afgoye, oo ka tirsan gobalka Shabeellaha Hoose.
Sanadka markii ahaa 1974-tii, wuxuu ka baxay dugsiga hoose ee Xaawa Taako ee Muqdusho iyo Dugsiga sare ee Sheekh Xasan Barsane.
Maxamed ayaa ah aqoonyahan leh khibrad dhanka maamul dowladeed iyo ganacsiba, isagoo dhankaas ka haysta khibrad ka badan 15 kana soo shaqeeyey maamulka dhanka xisaabaadka, hantidhowrka, qorsheynta qaranka iyo maamulidda qandaraasyada.
Wuxuu xilal sare ka soo qabtay dowladda hoose ee magaalada Washington, D.C. ee dalka Mareykanka.
Sidoo kale wuxuu kaloo aasaase iyo madax ka ahaa hay’adda lagu magacaabo Somalia Forward Foundation (SFF) oo ah hay’ad ka shaqeysa la talinta dowladaha, shirkadaha iyo hay’adaha daneeya horumarka iyo dib u dhiska Soomaliya.
wuxuu uu shahaadada Master-ka ama Darjada labaad ee Jaamacadda Business Administration wuxuu na kaga baxay jaamacadda lagu magacaabo Maryland University College, Graduate School of Management and Technology.
Wuxuu kaloo ka heystaa shahaadada Bachelor-ka waxaana uu bartay Science Accounting iyo Management Information Systems shahaadadaasi ka qaatay jaamacadda caanka ah ee George Mason University ee dalka Mareykanka.
Previous articleAkhriso: Golaha Wasiirada Soomaaliya oo ansaxiyay 3 hindise-sharciyeed: Sawro
Next articleTurkey set to open largest military camp in Somalia